सिएमसीमा कोरोना उपचार : खर्च सरकारले व्यहोर्ने – Daunne News
सिएमसीमा कोरोना उपचार : खर्च सरकारले व्यहोर्ने
By Daunne News	 On भाद्र २२, १४:५५
भरतपुर । चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को उपचार गर्दा लाग्ने बिरामीको खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
कोरोनाका बिरामीको उपचारमा लागेको खर्च सोधभर्नामार्फत दिनेगरी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको हो । कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गराउने निजी अस्पतालसँग पनि मन्त्रालयले यस्तो सम्झौता गरेको हो ।
चितवनमा अहिलेसम्म सिएमसीसँगमात्रै सम्झौता भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सिएमसीमा कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याब पनि रहेको छ । कोरोना पोजेटिभ भएका बिरामीहरुको सिएमसीले उपचार गर्नुपर्ने र त्यसबापतको पैसा सरकारले दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए । कोभिडका बिरामीहरुलाई उपचार गरेर पठाएपछि हरेक महिनामा लागत खर्चअनुसारको पैसा अस्पताललाई दिइने उनले बताए । ‘उहाँहरुले निःशुल्क उपचार गर्नुहुन्छ, बिरामीलाई पठाउँदै जानुहुन्छ । त्यसको आधारमा सम्पूर्ण विवरणसहित खर्च दाबी गर्नुहुन्छ र त्यस हिसाबमा महिना–महिनामा पैसा जान्छ’, उनले भने ।
अस्पतालले कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीलाई उपचार गरिसकेपछि सोधभर्नाबापत एकमुष्टरुपमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट उपलब्ध गराइने निर्देशिका बनेको छ । कोभिड–१९ को शंकास्पद तथा पहिचान भइसकेका बिरामीको उपचारमा लागत खर्च निर्धारण गर्दा उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, एकपटक प्रयोग गरेपश्चात् पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने स्वास्थ्य सामग्री तथा भर्ना भएका बिरामीलाई दिइने खाना खर्चमात्रै समावेश गर्नुपर्ने निर्देशिका रहेको छ ।
अस्पतालले कोभिड–१९ का लक्षण नभएका या सामान्य लक्षण भएका बिरामीको उपचार गरेबापत दैनिक तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ, लक्षण देखिएका बिरामीको दैनिक सात हजार रूपैयाँ र अति गम्भीर भई आइसियू तथा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको उपचार गरेबापत १५ हजार रूपैयाँ सोधभर्ना पाउनेछन् । लागत खर्च सरकारी अस्पताललाई उपलब्ध गराएसरह नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चितवनमा मेडिकल कलेजमा आइतबारसम्म १३६ जना कोरोना सङ्क्रमितहरुले उपचार गराएका छन् । सङ्क्रमण पुष्टि भई उपचार गराएका बिरामीहरुको विवरण दैनिकरुपमा मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको चितवन मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले बताए । ‘सङ्क्रमण पुष्टि भई हामीकहाँ उपचार गराएका बिरामीहरुको दैनिक विवरण पठाउने गरेका छौँ, पैसा लिएका छैनौँ । नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरुसँग भने पैसा लिएका छौँ’, उनले भने ।